एथेन्सका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू | Absolut यात्रा
एथेन्सका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
मारुउजेन | | एथेन्स
ग्रीस यो समुद्री तट, ग्रीष्म ,तु, रमाइलो छुट्टीहरू वा पुरातात्विक भग्नावशेषहरूको बीच पैदल समानार्थी हो। सामान्य कुरा राजधानी थाहा पाउनु हो र त्यसपछि यसको एउटा टापुमा उफ्रनु हो, तर यदि हामी एथेन्स र यस वरपर बस्दैनौं भने त्यहाँ ठूलो समुद्र तटहरू पनि छन्।
त्यसोभए, आज हामी कुरा गरौं एथेन्सका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू।
1 एथेन्स को समुद्री तट
2 एथेन्सको दक्षिण तटमा समुद्री तटहरू
3 Souio नजिक, एथेन्सको दक्षिण पूर्व को समुद्र तटहरू
4 माराटन नजिक दक्षिण पूर्वी एथेन्स को समुद्र तटहरू
एथेन्स को समुद्री तट
एथेन्स को पानीले नुहाएको छ एजियन सागर त्यसैले हामी टापुहरूको समुद्र तट भन्दा सुन्दर समुद्री किनार र हातको नजिक पनि पाउँछौं। यो होइन कि तिनीहरू उनीहरूलाई सपना भन्छन् ग्रीसमा एउटा छुट्टी थोरै लme्गडो हुने छ केही टापुहरूको लागि यात्रा नगरीकन, तर यदि तपाईंसँग समय छैन वा तपाईं केवल ग्रीसको राजधानी हुँदै जानुहुन्छ भने, यी समुद्री तटहरू दिनेछन् तपाईं केही सन्तुष्टि
सत्य यो हो कि एटेनासको नजिकका समुद्री किनारहरू धेरै छन्, र त्यहाँ साना समुद्री तटमा विलासी र राम्रा संगठित विकल्पहरू छन्, थोरै बालुवा र थोरै मानिसहरूसँग। आदर्श रूपमा, अन्वेषण र सबै कुरा तपाईसँग भएको खाली समय र तपाई कती गर्न सक्नुहुन्छ वा शहरको केन्द्रबाट टाढा जान चाहानुहुन्छमा भर पर्दछ.
भाग्यवस, यदि तपाईं यसका बारे सोच्दै हुनुहुन्छ पानीको गुणस्तर धेरै ठुलो शहरको नजीक उत्तर तिनीहरू हुन् धेरै राम्रो, कम से कम त्यो कुरा यूरोपियन वातावरण एजेन्सीले भनेको छ।
एथेन्सको दक्षिण तटमा समुद्री तटहरू
यी समुद्री तटहरू तिनीहरू Attica को अर्को पक्ष मा छन् र तिनीहरू आदर्श छन् यदि तपाईंसँग धेरै समय छैन वा तपाईंसँग कार छैन। यी दक्षिणी तटहरू ट्याक्सी, बस वा ट्रामबाट सजीलो पुग्न सकिन्छ। हेरौं, यहाँ Astir समुद्र तट, सुपर विलासी छ।
La Astir समुद्र तट यो एक हो एथेन्स को शीर्ष समुद्री तट। यो Vouliagmeni को सुरुचिपूर्ण छिमेकमा छ र पक्कै पनि यसमा सबै सेवाहरू छन्। मेरो मतलब, तपाई सक्नुहुन्छ भाडा सनबेडहरू, छाताहरू र जडानको मजा लिनुहोस् वाइफाइ। र खाने र पिउने बिक्रीको पनि अभाव छैन। अवश्य पनि, यो सस्तो समुद्र तट होईन र तपाईंले प्रवेश शुल्क तिर्नै पर्छ: हप्तामा २eयूरो, सप्ताहन्तमा e० यूरो, वयस्क प्रति।
हो, मूल्य उच्च छ र मौसममा सप्ताहन्तमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्, र हुनसक्छ सनबेड वा छाता उपलब्ध छैन। तपाईं प्रि-बुक गर्न सक्नुहुन्छ, हो, तर यो अझै गाह्रो छ। Astir समुद्र तट यसको लायक छ यदि तपाईं देख्न र ठाठ र प्यारा मान्छे बीच हुन। यो बिहान 8 मा खुल्छ र रातमा at बजे बन्द हुन्छ, तर यदि तपाईं रेस्टुरेन्टमा डिनरको लागि बस्नुहुन्छ भने तपाईं आधी रातसम्म रहन सक्नुहुन्छ।
अर्को समुद्र तट हो काभौरी बीच, Vouliagmeni को उही छेउमा। समुद्र तट समुद्री रूखहरू र महँगो घरहरूको साथ ज wood्गलित प्रायद्वीप हो। त्यहाँ बालुवाका केही स्ट्रिपहरू छन् र तपाईं पौडी खेल्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्र मेगालो काउउरी हो, सुदूरपश्चिममा, छाताहरू र सनबेडहरू सहित शुल्क तर नि: शुल्क क्षेत्रहरू।
काभुरी बीच सुनहरी बालुवा हो र समुद्रमा राम्रो पानी छ। त्यहाँ पुग्न गाह्रो छैन किनकि तपाईं सक्नुहुन्छ मेट्रोलाई Elliniko स्टेशनमा लैजानुहोस् र त्यहाँबाट बस १२२। भाग्यवस यो खाना र पेय बिक्री छ।
El ताल Vouliagmeni यो समुन्द्रको छेउमा एउटा अनौंठो भूवैज्ञानिक गठन हो र यसमा समुद्री तट पनि छ। पानी नुनिलो छतिनीहरू पहाडमा अवस्थित छन् र समुद्र तटमा सूर्य लाउन्जर र छाताहरू छन्। किनारको नजिक पानीको सतह गहिरो छैन, तर अर्को तर्फ यसको अज्ञात गहिराई छ, त्यसैले सावधान हुनुहोस्। यो सामान्य रूपमा ताल हुँदाहुँदै पनि पानी समुद्र भन्दा अलि बढी तातो छ मौसम लाभ लोकप्रियता.
तपाईंसँग धेरै सुविधाहरू छन्, त्यहाँ छ समुद्र तट बार धेरै सुविधाजनक, सबै दिन खोल्नुहोस्, कोठा, स्नान, व्हीलचेयर पहुँच र एक रेस्टुरेन्ट परिवर्तन गर्ने। जब घाम अलि तल जान्छ र यो शान्त हुन्छ, संगीत प्ले हुन थाल्छ। सामान्यतया, यो समुद्रको भन्दा शान्त समुद्र हो।
यदि तपाइँ समुद्रमा पौडी खेल्न चाहानुहुन्छ भने त्यसो भए तपाईको समुद्री तट हो थलासी समुद्र तट। यो एथेन्सको दक्षिण, Voula को उपनगर मा छ र धेरै सेवाहरु छ। तपाइँ राम्रो मूल्यमा कुर्सी र छाता भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र गर्मीमा प्राय: पार्टीहरू र लोकप्रिय गायकहरू हुन्छन्।
हप्ताका दिनमा तपाईले प्रति हेडeयूरो र साताको अन्त्यमा of प्रवेश शुल्क तिर्नुहुन्छ। तपाईं सार्वजनिक यातायातबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ, या त मेट्रो लिएर र Elliniko स्टेशनमा तल झरेर र त्यसपछि बस १२२ लिनुहोस् वा ट्रामलाई यसको टर्मिनलमा लगेर Asklipio Voulas हो।
La याबानाकी बीच यो Varkiza पड़ोस मा स्थित छ र एक प्रकारको बनाउँछ थिम पार्क किनकि यसले समुद्री किनार भन्दा बढि प्रस्ताव गर्दछ। त्यहाँ फास्ट फूड, कफि, पेय पदार्थ, समुद्री खाना, विशिष्ट ग्रीक खाना छ र तपाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ धेरै पानी खेल, रमाईला केली डु from्गाबाट वाटरस्किइ,, विन्डसर्फि or वा प्याडलबोर्डि to्।
सोमबार देखि शुक्रवार सम्म प्रवेश शुल्कeयूरो छ तर दरमा एक सूर्य लाउन्जर र छाता शामिल छ। शनिबार र आइतवार प्रवेश5यूरो हो तर तपाईंले छाताका लागि अतिरिक्तeयूरो तिर्नु पर्छ, जब सम्म तपाईं बेलुका after पछि प्रवेश गर्नुहुन्न जुन स्वतन्त्र छ।
तपाईं यस समुद्री किनारमा कसरी पुग्नुहुन्छ? तपाई फेरि मेट्रोलाई एलिन्को स्टेशनमा लैजान सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट १ 171१ वा १२२ बस।
अर्कोतर्फ, एडेम समुद्र तट एथेन्सको सब भन्दा नजिक छ, Alimos र Palio Faliro को जिल्लाहरु बीच। यो एक संगठित समुद्री तट हो, एक बोर्डवॉक संग त्यो व्यक्ति वरिपरि हिड्छ र त्यसले तपाईंलाई दुई अन्य साना साना समुद्र तटहरू, विशाल शतरंज बोर्ड र बिभिन्न सेवाहरूमा लैजान्छ। त्यहाँ ट्रामबाट पुग्न सजिलो छ, उही नामको स्टेसनमा बन्द हुँदै।
Souio नजिक, एथेन्सको दक्षिण पूर्व को समुद्र तटहरू
एटिका प्रायद्वीपको दक्षिणी भाग बिन्दु सुनिओ हो, जहाँ सुन्दर पोसीडनको मन्दिर, साँझ घण्टा मा यति लोकप्रिय। तर तपाईं त्यहाँ पुग्नुभएसम्म, ती line 35 किलोमिटर तटवर्ती क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै समुद्र तटहरू छन्। हो वास्तवमा, तपाईंलाई उनीहरूमा पुग्न कार चाहिन्छ.
La Sounio समुद्र तट यसमा प्रसिद्ध मन्दिरको अविश्वसनीय दृश्यहरू छन्, यो एक संगठित समुद्र तट हो र यसका धेरै सेवाहरू छन्। त्यहाँ पनि छ सार्वजनिक र नि: शुल्क क्षेत्रहरू। पानी पारदर्शी छ त्यसैले यहाँ पुग्नको लागि एक घण्टाको ड्राइभ लायक छ। अवश्य पनि, समयको साथ सावधान रहनुहोस् किनकि उच्च गर्मीको मौसममा यो विशेष कारको क्षेत्रमा पार्क गर्न गाह्रो हुन्छ। पछि, त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं माछा र समुद्री खाना खान सक्नुहुन्छ।
La Kape समुद्र तट सुन्दर छ र छ एजियनको उत्कृष्ट दृश्य। समुद्री सतह सानो ढु pe्गा र स्पष्ट पानीले बनेको छ। अवश्य पनि, ती द्रुत रूपमा गहिराइ प्राप्त गर्दछन् ताकि तपाईंले पौंडी कसरी जान्नुपर्दछ। यस समुद्री किनारले भर्खरका वर्षहरूमा प्रख्यातता बढाएझैं त्यहाँ शनिबार र आइतवारहरू प्राय: मानिसहरू हुन्छन्। के तपाई यहाँ खानपिन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ क्यान्टिन छ, तर यो सधैं खुला हुँदैन त्यसैले तपाईं आफ्नो आपूर्तिहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ।
र अन्तमा, यदि तपाईं ना naked्गै हिंड्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईं अलि हिंड्नुभयो भने तपाईं अर्को समुद्र तटमा पुग्नुहुनेछ, सानो, जहाँ यो अभ्यास गरिएको छ नग्नवाद.
La Asimakis समुद्र तट यो पहिलेको भन्दा राम्रोसँग चिनिन सकेको छैन, तर यदि तपाईं यसको नजिकको समुद्री किनारमा केही नगरी मन्दिरको अन्वेषण गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो विकल्प हो। यो सामान्यतया ठूलो श्रोता हुँदैन, यो छ Sounio बाट Lavrio सम्म सडक, र यो धेरै बालुवा छ। हो वास्तवमा, कुनै छाता छैन, त्यसैले यदि तपाईंसँग यो छैन भने यो तपाईंलाई उपयुक्त छैन।
Asimakis बीच एक रेस्टुरेन्ट छ र एथेन्स देखि एक घण्टा को दूरीमा छ।
माराटन नजिक दक्षिण पूर्वी एथेन्स को समुद्र तटहरू
यो समुद्री तटको अर्को समूह हो एथेन्सको दक्षिणपूर्व र पनि यो कार हुनु आवश्यक छ किनभने त्यहाँ तपाईं छिटो र सजिलो हुन्छ। प्रसिद्ध म्याराथन लडाई यहाँ भयो, त्यसैले तपाईं इतिहास र फुर्सद संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
सूचीमा पहिलो समुद्र तट हो Schinias समुद्र तट, धेरै, धेरै विस्तृत, एउटा दलदलको अन्त्यमा जुन सुरक्षित क्षेत्र र पाइन वन हो, मराटाको चिहानबाट केवल kilometers किलोमिटरएन यहाँ पौंडी खेल्न राम्रो छ र यहाँ केही बुहारीहरु छन्।
समुद्र तट अरूसँग भन्दा बढी संगठित भागहरू छन्, ताकि तपाईं अधिक वा कम मानिसहरूसँग हुन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सार्वजनिक यातायात र कार द्वारा सजीलो पहुँच योग्य छैन यो लामो समय लाग्छ minutes० मिनेट।
La Dikastik समुद्र तट अर्को विकल्प हो यदि तपाईं केहि खोज्दै हुनुहुन्छ विशिष्ट र कम लोकप्रिय। यो Schinias बीचको छेउमा र छ यसको कुनै बालुवा छैन, तर चट्टानहरू। यो एक सुन्दर गन्तव्य हो, समान नामको छिमेकमा थुप्रै रमणीय घरहरू सहित, तर अवश्य पनि, छाता छैन र तल झर्नु अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ ...
खैर, अहिलेसम्म एथेन्सका केही उत्तम समुद्र तटहरू, तर पक्कै तिनीहरू केवल एक मात्र होइनन्। हामी यो नाम पनि राख्न सक्छौं लगोनिसी, वरकिजा, ग्लाइफाडा, आकांथस, लेग्रेना, फ्लाइभोस, याबानाकी, क्राबो, निरिदेस वा लिमानाकियाको सुन्दर अनुहारको समुद्री तट।
रमाइलो गर्न एथेन्स तटहरू सधैं मनमा राख्नुहोस् त्यहाँ सप्ताहको दिनमा कम व्यक्तिहरू छन्, त्यस्तो चीज जुन हामी पर्यटकहरूको रूपमा राम्रोसँग लिन सक्दछौं, त्यो सुन्तला झण्डाको अर्थ त्यहाँ केवल केही खास समयहरूमा जीवन रक्षकहरू हुन्छन् र रातोको मतलब त्यहाँ कोही पनि हुँदैन भन्ने हुन्छ, समुद्री तटमा समुद्री किनारमा पानीमा प्राय: कोरिडोर हुन्छन्। पौंडी र डु boats्गाका लागि होशियार हुनुहोस्, र जुन जुलाई र अगष्टको बीचमा तेज बतासहरू छन् त्यसैले त्यहाँ तीव्र धारहरू पनि आउन सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » एथेन्सका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
अमेरिकामा सर्वश्रेष्ठ मैन संग्रहालयहरू
अष्ट्रेलिया मा वातावरण